Momba anay - Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd.
Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd.dia orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny scaffolding any Shina. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2003, ny RS dia nitombo hanana fanamby vaovao ary ny fahombiazany hatrany dia avy amin'ny fanomezana lanja ny mpanjifany sy ny mpiasa ao aminy ary ny fanoloran-tenany amin'ny serivisy, ny fahombiazany ary ny kalitaony.
Tsy isika irery no manam-pahaizana amin'ny famolavolana sy ny famokarana karazana scaffoldings vy sy ny rafitra formwork, fa koa anokanay ho manam-pahaizana amin'ny fampiroboroboana ny scaffoldings aluminium. Ny vokatrao lehibe dia misy Ringlock (Allround), Cuplock, Kwikstage, Haky, Frames, Props, sns.
Manana toerana lehibe manodidina ny 100km miala ny seranan'i Shanghai ny orinasanay, izay 30 minitra fotsiny miala an'i Shanghai amin'ny lamasinina ary adiny iray amin'ny fiara. Manodidina ny 30000m2 ny velaran'ny atrikasa, ary manodidina ny 10.000m2 ny trano fanatobiana entana.
Rapid Scaffold dia mirehareha amin'ny fananana ekipa manam-pahaizana momba ny injeniera sy manam-pahaizana mahay ary mahay. Araka ny fangatahana samihafa avy amin'ny mpanjifanay, afaka manome karazana scaffolding sy famolavolana formwork izahay. Manome serivisy fiatoana izahay ho an'ny tetikasa.
Manana ekipa mpamokatra efa za-draharaha izahay, izay mitazona ny ambaratonga avo indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny fandrosoana. Ny ekipa mpiasa tsirairay avy dia tarihin'ny mpanara-maso iray manara-maso ny asa isan'andro. Ny rafitra welding sy automatique automatique dia be mpampiasa. Manamboatra milina fananganana vy vaovao izahay, izay mampitombo ny fahafaha-mamokatra plank, manodidina 1.000 pcs isan'andro. Miaraka amin'ny mpiasa efa za-draharaha, milina mandroso sy fitantanana tsara, ny fahaizantsika dia momba 25,000 taonina isan-taona.
Manana rafitra fanaraha-maso kalitao tanteraka izahay, izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra avoakanay ary manome toky fa ny fandaharam-potoana rehetra dia vokatry ny fandaharam-potoana. Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd. efa nahazo Fanekena ISO9001, CE, ISO14001, OHSAS18001. Ny rafitry ny scaffolding rehetra dia voasedra hanamafisana ny ANSI A10.8, AS / NZS1576.3, JIS manara-penitra JIS.